Waa imisa qiimaha magaalada ku taal magaaladaadu? - Geofumadas
Sebtember, 2018 cadastre, Geospatial - GIS, Maamulka Land
Su'aal aad u ballaadhan oo kicin kara jawaabo badan, qaar badan oo iyaga ka mid ah xitaa qiiro leh; doorsoomayaal badan haddii ay tahay dhul leh ama aan lahayn dhisme, yutiilitida ama badan aagagga caadiga ah. In uu jiray bog aan ku ogaan karno qiimaha dhulka ku yaal aag gaar ah oo ka mid ah magaaladeena, wuxuu shaki la'aan caawimaad weyn u noqon lahaa dhinacyada la xiriira cadastre, suuqa guryaha ama qorshaynta isticmaalka dhulka.
Illaa iyo hadda waan ku faraxsanahay dadaalka "Khariidadda qiimaha dhulka ee Latin America«, Kaas oo raadinaya ujeedadan, iyada oo loo marayo qaab iskaashi iyo adeegsiga tikniyoolajiyadda websaydhka. Waxay u badan tahay inay ku dambayn doonto inay ahaato jaangooyo macnaha guud ee Latin America, ugu yaraan magaalooyinka muhiimka ah, gaar ahaan habka isbarbardhiga ee u dhexeeya gobollada iyo waddamada.
Abaabul wada shaqeyn
Daabacaadda 2018, waxay soo bandhigaysaa casriyeyn ku saabsan waxa ay bilowday laba sano ka hor: nidaaminta qiimaha qiimaha magaalooyinka ee magaalooyinka Latin America ee kala duwan oo suuqa ka masuul ah hagaajinta. Qaas ahaan, iyo xaqiiqda ah in ay soo saari karto sharaf ama sharaf leh, waa in ay tahay wadashaqeyn iskaashi oo gebi ahaanba bilaash ah. Ka qaybqaado dhammaan noocyada mutadawiciinta kuwaas oo bixiya gabal kaa caawisa buuxinta xujooyinka kuwaas oo mararka qaarkood muuqda aagagga dhaqaale ee dalalkeena. Furitaanka waxaa loola jeedaa dadka lala xiriiriyo akadeemiyadda, xirfadleyda, wakiilada guryaha iyo saraakiisha dawladda, iyo sidoo kale hay'adaha dawliga ah iyo kuwa gaarka loo leeyahay ee la xidhiidha maareynta siyaasadaha dhulka. Waa gebi ahaanba xor u ah oo ka madaxbannaan danta dhaqaale ama siyaasadeed ee cadaadiska ku saari kara qabanqaabiyeyaasha ama waxay u baahan tahay marka la gelinayo qiimo gaar ah.
Mashruucan wuxuu xisaabinayaa iyada oo laba qoraal oo hore ah, mid ka mid ah 2016 iyo mid kale oo 2017 ah. Thanks to the works, wadarta qiyaasta xogta 7,800 ee xogta ka timid dalalka 16 ee ka duwan gobalka ayaa la ururiyey.
Muhiimadda ogaanshaha qiimaha dhulka magalada
Iyadoo laga soo qaaday fikradan cusub, su'aalaha ayaa ka soo baxa sababta ay muhiimka u tahay ama waxay noqon kartaa mid faa'iido leh oo lagu ogaanayo inta dhul ee aag gaar ah. Jiritaanka bangiga macluumaadka mawduucan wuxuu gacan ka geysan karaa in la midoobo shuruudaha marka la qorsheynayo siyaasadaha dadwaynaha iyo in la kordhiyo qorshe xuduudeed oo gaar ah oo loogu talagalay magaalooyinka ugu muhiimsan gobolka. Qiyaasta qorshaynta magaalooyinka, sida koox guryo bulsheed, waxay yeelan doontaa sharcinimo dheeraad ah haddii lagu fuliyay dhowr waddan oo qeexaya xeerarka qaarkood; Ma aha in la sheego mashaariic ay ka mid yihiin la wareegidda, xaqiraadda iyo magdhowga.
Mid ka mid ah sifooyinka muuqda ee mashruucani waa suurtagalnimada in tiro badan oo dad ahi ay waxtar u yeeshaan macluumaadka bilaashka ah ee internetka.
Waxaan maqalnay wax badan oo ku saabsan crowdfunding oo ah hab lagu kobciyo ama lagu maalgaliyo mashruuc si markaas loo fulin karo. Waxay yihiin dad, shirkado ama hay'ado lacag dhigaya si uu qof kale u sii wado ujeedooyinkooda, isaga oo ka faa'iideysan kara kartida webka. Iyada oo la badmaaxida farsamadu waa isku mid siman, farqiga keliya ee ka qaybqaatay ma aha lacag laakiin macluumaadka ama aqoonta taas oo bedesho midka ku habboon macluumaadka qayb ka mid ah wadashaqeynta mashruuca. Tarjumaadda waxaa loo fahmi karaa "iskaashiga ballaaran". Waa, qaab-qaabeedeed, si ballaaran, joogto ah, bilaash ah, furfuran oo si sahlan loo heli karo, iyo diiradda saaritaanka geolocation ayaa dhammaatay dad badan.
Afar isticmaalka oo la siin karo qalabkan
Hawlaha ugu horreeya waxaa lagu bixiyaa dhinacyo cilmi ah. Waxaa loo isticmaali karaa isugeyn sax ah oo sax ah oo sax ah marka la sameynayo tirakoobka isbarbardhigga. Tusaale ahaan, suurtagalnimada helitaanka guri wuxuu noqon karaa waji lagu xisaabtami karo marka la falanqeynayo heerka nolosha qof gaar ah; Haddii aan leenahay xogta gobolka ee kor ku xusan, waxaan isbarbardhigi karnaa heerka nolosha dadka Buenos Aires oo ka soo horjeeda magaalooyinka kale ee Argentina, si loo magacaabo kiis.
Meel kale oo ka mid ah khariidadan qiimaha lagu isticmaali karo ayaa loogu talagalay cadastre maaliyadeed. Sannad kasta dawladaha hoose sida caadiga ah waxay u baahan yihiin xogta suuqa si ay u cusboonaysiiyaan qiyamka aagagga juqraafiyeed, ee ay tahay in qiimaynta lagu cusbooneysiiyo, canshuurahana laga qaado Caadi ahaan tani waxay u baahan tahay la-tashiga qiimaha shirkadaha guryaha, iibka lagu kalsoonaan karo ee Diiwaanka Hantida, ogeysiisyada iibka ee warbaahinta, iwm. Hagaag tani waa ilo aad ugu habboon tan; Layaab ma noqon doonto in shaqaalaha dowladda hoose ee dhibaatada ka soo gaarto arrintan ay halkan ka cusbooneysiinayaan xogtooda si aan looga harin waxa dadka kale ay sameynayaan si ay ugu fududaato baaritaankooda. Waa inaan cadeeyaa in qiimayaashani yihiin qiyamka suuqa oo kaliya tixraacaya dhulka, kuma jiraan qiimaha dhismaha.
Habka seddexaad wuxuu la xiriiraa kii hore, laakiin wuxuu ku hoos socdaa dhaq dhaqaaqa suuqa; qaasatan maxaa yeelay kaliya markaad fiiriso khariidada waxaa suurtagal ah in lagu go'aamiyo aagaga magaalada ee hantida ugu badan ay guureyso; Shar iyo xumaanba, macluumaadkani wuxuu xitaa noqon karaa mid waxtar leh oo lagu dhiirigelinayo maalgashiga ama lagu aqoonsado macluumaad aan la shaacin. Saldhigga macluumaadka waa la soo dejin karaa, xogtana waxaa ku jira faahfaahinno looga faa'iideysan karo ujeedooyin badan, sida kala duwanaanshaha aagga badan, adeegyada la heli karo, ilaha xogta iyo isticmaaleha bixiyay.
Ugu dambeyntii, iyo laga yaabee in heer yar oo heer sare ah oo heer sare ah, qalabkan noocan ah wuxuu u adeegaa sii wadista joojinta caqabadaha. Iyadoo loo naaxiyo, shiday by foomamka Internet oo cusub ee isgaadhsiinta, taasoo wadada u xaareysa la taaban karo mashaariic sida map ka mid ah qiimaha dhulka ee Latin America kordhinayaan in la xoojiyo xiriirka u dhexeeya dadka quruumaha kala duwan midoobeen anshaxa caadi ah .
Hirgelinta mashruucan wuxuu leeyahay mudnaanta koowaad ee hawlaha Machadka Siyaasadda Dhulka Lincoln taas oo dooneysa in ay ballaariso ka qaybqaadashadooda iyo joogitaanka Latin America iyo Kariibiyaanka iyada oo loo marayo dhiirigelinta dadaallada waxbarasho iyo cilmi-baarista iyo noocyada kala duwan ee mashaariicda faafinta.
Eeg qiimayaasha qiimaha map
Post Previous" Hore Wms2Cad - isdhexgalka adeegyada wms ee barnaamijyada CAD
Post Next Barnaamijka ugu Fiican ee Dhismaha - Abaalmarinta Xisaabinta Dhismaha 2018Next »